Ny basy Spray dia karazana fitaovana iray izay mampiasa haingana ny famoahan-tsolika avoakan'ny rivotra na manempotra toy ny heriny. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fanamboarana ny fanaparitahana sy fitaovana ilaina amin'ny fanaingoana ny fanaingoana. Azo ampiasaina eo amin'ny sehatry ny famonoana fiara izany, toy ny famafazana fiara, ny famonosana ny fiara OEM, ny famonosana ny lalamby, sns .. Azo ampiasaina koa amin'ny famonoana vy, famafazana plastika, famafazana ny vokatra vita amin'ny hazo, fanodinana indostrialy, famonosana fitaovana nano, zavakanto Sitrana sy kianja hafa.
Ny basy mitam-basy dia novolavolaina niaraka tamin'ny fampandrosoana ny indostrian'ny fiara sy ny indostria coating. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, miaraka amin'ny fampiroboroboana ny indostrian'ny fiara sy ny coating eran-tany, dia mihamivoatra ihany koa ny indostrian'ny basy mitam-basy, mitombo ny sokajy vokatra, mitombo ny sehatry ny fangatahana, ary aseho ireto toetoona manaraka ireto:
Amerika Avaratra, Eropa ary Azia no tsenan'ny mpanjifa lehibe indrindra. Ny fangatahana fantsom-basy amin'ny ankapobeny dia avy amin'ny sehatry ny fiara, fananganana, famokarana vokatra hazo ary vokatra indostrialy. Ny zava-misy amin'ny fanjifana dia misy fifandraisana lehibe amin'ny fampandrosoana ny tsena midina. Avy amin'ny fampandrosoana ny tsena midina dia azo jerena fa i Amerika Avaratra, Eropa ary Azia no tsenan'ny mpanjifa lehibe amin'ny alàlan'ny fiaramanidina eran-tany, miaraka amin'ny fangatahana fatra betsaka.
Asia dia faritra mpamatsy lehibe. Miaraka amin'ny fampandrosoana ny tsenan'ny tsiranoka any Amerika Avaratra sy Eropa, i Asia dia lasa tsikelikely no toerana fitaterana basy famokarana eran'izao tontolo izao eo ambanin'ny fironana famindrana indostria. Anisan'izy ireo, nahazo tombony tamin'ny fampandrosoana ny toekarena sy ny fampandrosoana haingana ny indostrian'ny basy ny Chine. Ny mpanamboatra eran-tany lehibe dia nanangana orinasa miompana amin'ny fananana manontolo na firenena vahiny any Sina mba handray anjara amin'ny famokarana vokatra sy hampiroborobo ny fitomboan'ny famatsiana.
Vao maika mihahery ny fifaninanana eo amin'ny orinasa. Misy ihany ny sakana ara-teknika sy ara-bola ao amin'ny indostrian'ny basy. Amin'izao fotoana izao, ny marika lehibe amin'ny basy mitsipoka an'izao tontolo izao dia ahitana ny SATA Alemanina, ananiste Iwata Japoney, vondrona mpanao sary hosodoko Amerikana, gurik amerikana, sary hosodoko Swiss Swiss, Alarobia Wagner, klioba karazana xucannak japoney, sns. Tato anatin'ny taona vitsivitsy. ny fampandrosoana ny indostrian-basy eran-tany sy ny fandrosoan'ny teknolojia dia mihamalalaka hatrany ny orinasa, izay mahatonga ny fifaninanana eo amin'ny tsena.
Ny fahafahan'ny fanavaozana tsy tapaka. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, notarihin'ny fangatahan'ny tsena sy ny fivoaran'ny siansa sy ny teknolojia, ny fahaiza-manavaozana ny indostrian'ny basy manaparitaka eran-tany dia mihatsara hatrany, tsy mitsaha-mitombo ny karazan-tsofin'ny fitaovam-basy mitombo, tsy mitsaha-mitombo ny fampisehoana ary mizara ny tsena. ny basy tsy misy haingam-basy, ny basy mandeha ho azy, ny basy miaro ny tontolo iainana ary ny vokatra hafa.
Ny fiaramanidina dia fitaovana famoronana mahery vaika izay afaka mijoro irery ho fanambarana ara-javakanto na ampidirina ao anaty «boaty fitaovana» ​​noforonina efa voaforona mba hamokatra teknika maro isan-karazany.
Amin'izao fotoana izao, amin'ny firenena mandroso indostria vahiny mandrindra ny fantsom-pifandraisana amin'ny indostrian'ny fiara sy ny indostrian-tsolosa amin'ny ankapobeny dia amin'ny ambaratonga mandroso kokoa, ny orinasa lehibe eran'izao tontolo izao dia mifantoka indrindra any Etazonia sy Japana. Mandritra izany fotoana izany, ny orinasa vahiny dia manana fitaovana efa mandroso, ny fahaizan'ny R & D matanjaka, ny ambaratonga ara-teknika no ao amin'ny toerana ambony indrindra.
Na dia nitondra be dia be aza ny fivarotana fiaramanidina fiaramanidina, ny vondrona fandinihana dia manome soso-kevitra ireo tompon'andraikitra vaovao izay manam-bola fotsiny nefa tsy misy tombony ara-teknika sy fanohanana avy any ambany, dia aza miditra haingana amin'ny sehatry ny fiaramanidina fiaramanidina.